Ithegi: xa kuthelekiswa | Martech Zone
Intengiso yakho ephumayo ayisebenzi ngaphandle kwemizamo engenayo
NgoLwesithathu, Juni 8, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Ukuba ubukhe wafunda ibhlog yam ixesha elide, uyazi ukuba igama ngokuchaseneyo lihlala lithumela kum umsindo ongaboniyo. Abantu ngaphezulu kweSoftwareAdvice bathumele inqaku elineenkcukacha, Ukuthengisa ngaphakathi kunye nokuThengisa okuPhumayo: I-Primer yeeNewbies okanye iiSwitchers. Isikhokelo senza umsebenzi ogqwesileyo wokuhamba ngeendlela, iyantlukwano, kunye nezixhobo zamacebo angenayo kunye nezicwangciso zokuphuma. Kubaluleke kakhulu ukufundwa ngoko ke khangela.
Andiqinisekanga ukuba ubushushu buyile nini le inforgraphic, kodwa kulungile kangangokuba kuye kwafuneka ndibelane ngayo. Isizathu sokuba kulungile kukuba kujongeka ngokunyanisekileyo kunye nokuthelekisa indlela abaqeqeshi bezentengiso abasebenzisa ngayo imithombo yeendaba zentlalo kuthelekiswa nomntu ophakathi, ongathengisiyo. Andikholelwa ukuba iinkokeli ezaneleyo kolu shishino zipeyinta umfanekiso onyanisekileyo wokusetyenziswa kweendaba zosasazo. Uninzi lwazo luyandikhumbuza ngokurhabaxa ngokukhawuleza kwe-sheisters phaya. Kufanele si
UJay Baer yenye yezona zithethi zentengiso zentlalontle kunye nababhali endibakhathaleleyo. Kutshanje ubhale iposti yebhlog emnandi kunye ne-infographic ebonelela ngothelekiso olukhulu lwabaphembeleli ngokuchasene nabameli be brand. Ukuphembelela ukufikelela kuluntu yeyona nto iphambili kumajelo eendaba ezentlalo kunye neenkqubo zonxibelelwano zoluntu zale mihla. Kodwa bahlala bebonakalisa ukungasebenzi ekuziphatheni okungaphaya kokuncokola. Ndabhala iposti malunga nokuba kutheni le nto ibizwa njalo, Kutheni usenza i-Intanethi